पूर्वमन्त्री विसेन्द्र पासवानले होटेलको मस्तीदेखि कालोबजारको कारोबारमा लागेको रकमको माग गरेको खुलासा !::mirmireonline.com
पूर्वमन्त्री विसेन्द्र पासवानले होटेलको मस्तीदेखि कालोबजारको कारोबारमा लागेको रकमको माग गरेको खुलासा !
पूर्वजनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विसेन्द्र पासवानले अवैध रुपमा गरेको आफ्नो कारोवारको विवरण मन्त्रालयमा बुझाएको खुलासा भएको छ । यसबाट सरकारको बेइज्जत भएको भन्दै कर्मचारीहरुले भने विरोध गरेका छन् ।
पासवान आफ्नो उपचारमा लागेको सबै खर्च र कालोबजारमा गरेको कारोवार राज्यको ढुकुटीबाट दिनुपर्ने भन्दै दैनिक मन्त्रालय धाउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
अवैध तरिकाले भारतीय नोट कालोबजारमा सटही गरेको र सो क्रममा तिर्नुपरेको चर्काे शुल्क समेत राज्यले दिनुपर्ने पासवानको माग छ ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुलाई समेत प्रभावमा ल्याइ मन्त्रीपरिषदबाट उक्त खर्च दिने प्रस्ताव पास समेत गराई सकेको बताईएको छ । तर, कर्मचारीहरुले त्यस्तो रकम तिर्न कुनै हालतमा नसकिने भन्दै रोकेका छन् ।
पासवानले कालोबजारमा १५ लाख २ हजार ९ सय ९४ भारतीय रुपैयाँ सटही गरेको जानकारी दिएर सो बराबरको रकम माग गरेका छन् । यो रकम उनले आफू भारतमा उपचार गर्न जाँदा बैंकमा नपाएपछि कालोबजारमा चर्काे पैसा तिरेर साट्नुपरेको दावी गरेका छन् । उनले कालोबजारमा चल्तीको दरभन्दा प्रतिसय चार रुपैयाँ बढी तिरेर किनेको पनि जनाएका छन् ।
केहिदिनअघि आफूले निवेदनमा दाबी गरेअनुसार रकम पाउ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेका पासवान कर्मचारीले उपचार खर्चभन्दा बाहिरको बिल बढी आएको र रकम उपलब्ध गराउन कठिन भएको बताएपछि रिंँगटा लागेको भन्दै बेहोस भएका थिए ।
पासवानले सरकारकै मातहतमा रहेको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा गराएको उपचारमा ७३ लाख रकम लागेको जनाएका छन् । यस्तै उनले मेदान्त अस्पतालमा उपचारका लागी जाँदा होटेलमा बसेको १९ लाख तथा यतायातबापत करिब ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि दावी गरेका छन् ।
उनले आफ्नो फाइल मन्त्रिपरिषदबाट छिटो पास गराउन प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि निकै लविङ गरेको बताईएको छ ।